ကွေးနီခှကျထဲ ရထေညျ့သောကျရုံနဲ့ ရရှိမယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးကြိုးမြာ – Youth Bar
ကွေးနီခှကျထဲ ရထေညျ့သောကျရုံနဲ့ ရရှိမယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးကြိုးမြာ
ဗီရိုထဲမှာ အလှ ထညျ့သိမျးထားတဲ့ ကွေးနီခှကျလေးတှေ ရှိမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုကွေး၊ကွေးနီခှကျလေးတှဟော အလှဆငျရုံ တဈခုတညျးတငျ အသုံးဝငျတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီထကျ ပိုကွီးမားတဲ့ အသုံးဝငျမှုကွီး ရှိပါသေး တယျ။ စိတျဝငျစား သှားပွီဟုတျ!
ကွေးနီခှကျတှဟော ခန်ဓာကိုယျနဲ့ စိတျကနျြးမာရေး အတှကျ အမြားကွီး ထောကျပံ့ပေး နိုငျပါတယျ။ ကွေးနီခှကျထဲမှာ ရတေဈည ထညျ့သိပျ ထားပွီး မနကျ မိုးလငျးသောကျ တဲ့အခါ အခုဖျောပွမယျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရလာ နိုငျပါ သတဲ့။
ကွေးနီဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျး စှမျးအငျတှကေို စုစညျးပေးသလို ကွှကျသား တဈရှူးတှေ ကိုလညျး သနျမာလာစေ ပါတယျ။ သံဓာတျကို ပိုမို ရရှိ လာစပွေီး လူက နလေို့ထိုငျလို့ ပိုပွီး ကောငျးလာ ပိုပွီး ပေါ့ပါးလာစတေယျလို့ သိရ ပါတယျ။ ဘယျလို အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရနိုငျသေးလဲ ဆိုတာ ကွညျ့လိုကျပါဦး
ဝိုးးးကွေးနီခှကျနဲ့ ရသေောကျပေးရုံနဲ့ အစာခြေ စနဈကို ကောငျးမှနျလာစပွေီး အဆီတှကေို မွနျမွနျခဖြေကျြအားကောငျးစပေါ တယျတဲ့။ ပုံမှနျထကျ စာရငျကွေးနီကွောငျ့ နှဈဆခဖြေကျြ အားကောငျးသှားတဲ့သဘော။
တဈခါတဈလေ ဘာမှ မလုပျရပဲ ပငျပနျးနတောတှေ၊ ဟိုးနား ဒီနားသှားတာနဲ့ အလှယျတကူမောနတောတှေ ဒီလိုမြိုးတှလေညျး မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျ ပါတယျ။
ကွေးနီခှကျထဲမှာ တဈည သိပျထားတဲ့ ရကေိုသောကျသုံး တဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျတှငျးဇီဝဖွဈစဉျကို ပိုပွီးကောငျးမှနျ လာစကော အသားအရညျ ယားယံတာ မြိုးတှလေညျး မဖွဈစတေော့ ပါဘူး တျောရုံတနျရုံအရပွေားရောဂါတှကေို မွနျဆနျစှာပြောကျကငျးေ စပါတယျ။
ကွေးနီမှာပါဝငျတဲ့ antioxidant သတ်တိကွောငျ့ ကငျဆာဖွဈပှားစနေိုငျတဲ့ ဆဲလျတှကေို ကောငျးကောငျးတုံ့ပွနျနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးမှာ ရှိနတေဲ့ ဆဲလျတှအေားကောငျးတဲ့ အခါ ကငျဆာဆဲလျတှကေို တိုကျခိုကျနိုငျပွီး ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားမှုကို ကာကှယျနိုငျ ပါတယျ။
Melanin ဆိုတာ အသားအရညျ၊ မကျြလုံး၊ ဆံပငျအရောငျတှကေို ထိနျးသိမျးပေးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုပါ။ အသကျကွီး လာတဲ့ အခါ အသားအရညျတှဖွေူလြော့ လာတယျ။ ဆံပငျတှေ ဖွူလာတယျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ melanin လြော့နညျးနလေို့ဖွဈပါတယျ။Melanin နဲ့ကွေးနီဟာ နရေောငျကွောငျ့ ပကျြစီးသှားတဲ့ အသားအရညျနဲ့ ဆံပငျတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီလို Melanin ဓာတျလြော့နညျး မသှားပဲ ပုံမှနျ အတိုငျးဖွဈစဖေို့ ကွေးနီက ကူညီပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ကွေးနီခှကျနဲ့ ရသေောကျခွငျးရဲ့အကြိုးကြေးဇူးက အံ့မခနျးလို့ ပဲပွောရ မှာပါပဲ
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အကြိတျနဲ့ ပတျသကျပွီးရောဂါဝဒေနာ ခံစားရလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကွေးနီဓာတျနညျးပါးလို့ ပါ။ ဒါကွောငျ့ကွေးနီခှကျနဲ့ ရသေောကျပေးမ ယျဆိုရငျ thyroid hormone level ကိုညှိပေးတဲ့ အတှကျ အကြိတျသကျတဲ့ ရောဂါဖွဈပှားမှုလြော့နညျးအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ကွေးနီမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှလေိုပဲ antioxidant တှပေါရှိ ပါတယျ။ ဒီ antioxidant တှကွေောငျ့ အသားအရညျတှဲ ကတြာမြိုး၊အရေးအကွောငျး ဖွဈတာတှကေို ထိနျးပေးထားနိုငျပါတယျ။
သူမြားတှေ အရေးအကွောငျးတှဖွေဈနခြေိနျ သငျ့မှာတော့ နုနယျပြိုမဈြတဲ့အသားအရညျကနျြရှိနနေိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
စိတျကမကနျြးမာရငျ ခန်ဓာကိုယျကွီးကလညျး မလနျးဆနျးတော့ပါဘူးနျော။ ဒါပမေဲ့ ကွေးနီကတော့ စိတျကိုပေါ့ပါးလနျးဆနျးစတေဲ့ 
အပွငျစဉျးစား တှေးချေါမှု အားလညျးကောငျးစေ ပါတယျတဲ့။ အလှယျတကူ မလြေ့ော့တာမြိုးလညျး မဖွဈတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ကွေးနီခှကျလေးတှထေဲ ရထေညျ့ တဈညသိပျပွီး သောကျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့လေး လုပျကွညျ့ပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
ကြေးနီခွက်ထဲ ရေထည့်သောက်ရုံနဲ့ ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ
ဗီရိုထဲမှာ အလှ ထည့်သိမ်းထားတဲ့ ကြေးနီခွက်လေးတွေ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကြေး၊ကြေးနီခွက်လေးတွေဟာ အလှဆင်ရုံ တစ်ခုတည်းတင် အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက် ပိုကြီးမားတဲ့ အသုံးဝင်မှုကြီး ရှိပါသေး တယ်။ စိတ်ဝင်စား သွားပြီဟုတ်!
ကြေးနီခွက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး အတွက် အများကြီး ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ပါတယ်။ ကြေးနီခွက်ထဲမှာ ရေတစ်ည ထည့်သိပ် ထားပြီး မနက် မိုးလင်းသောက် တဲ့အခါ အခုဖော်ပြမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာ နိုင်ပါ သတဲ့။
ကြေးနီဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်တွေကို စုစည်းပေးသလို ကြွက်သား တစ်ရှူးတွေ ကိုလည်း သန်မာလာစေ ပါတယ်။ သံဓာတ်ကို ပိုမို ရရှိ လာစေပြီး လူက နေလို့ထိုင်လို့ ပိုပြီး ကောင်းလာ ပိုပြီး ပေါ့ပါးလာစေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်သေးလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး
၀ိုးးးကြေးနီခွက်နဲ့ ရေသောက်ပေးရုံနဲ့ အစာချေ စနစ်ကို ကောင်းမွန်လာစေပြီး အဆီတွေကို မြန်မြန်ချေဖျက်အားကောင်းစေပါ တယ်တဲ့။ ပုံမှန်ထက် စာရင်ကြေးနီကြောင့် နှစ်ဆချေဖျက် အားကောင်းသွားတဲ့သဘော။
တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှ မလုပ်ရပဲ ပင်ပန်းနေတာတွေ၊ ဟိုးနား ဒီနားသွားတာနဲ့ အလွယ်တကူမောနေတာတွေ ဒီလိုမျိုးတွေလည်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ကြေးနီခွက်ထဲမှာ တစ်ည သိပ်ထားတဲ့ ရေကိုသောက်သုံး တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန် လာစေကာ အသားအရည် ယားယံတာ မျိုးတွေလည်း မဖြစ်စေတော့ ပါဘူး တော်ရုံတန်ရုံအရေပြားရောဂါတွေကို မြန်ဆန်စွာပျောက်ကင်းေ စပါတယ်။
ကြေးနီမှာပါဝင်တဲ့ antioxidant သတ္တိကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဆဲလ်တွေအားကောင်းတဲ့ အခါ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။
Melanin ဆိုတာ အသားအရည်၊ မျက်လုံး၊ ဆံပင်အရောင်တွေကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အသက်ကြီး လာတဲ့ အခါ အသားအရည်တွေဖြူလျော့ လာတယ်။ ဆံပင်တွေ ဖြူလာတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ melanin လျော့နည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။Melanin နဲ့ကြေးနီဟာ နေရောင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည်နဲ့ ဆံပင်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို Melanin ဓာတ်လျော့နည်း မသွားပဲ ပုံမှန် အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ ကြေးနီက ကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကြေးနီခွက်နဲ့ ရေသောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးက အံ့မခန်းလို့ ပဲပြောရ မှာပါပဲ
လူတော်တော်များများဟာ အကျိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရောဂါဝေဒနာ ခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကြေးနီဓာတ်နည်းပါးလို့ ပါ။ ဒါကြောင့်ကြေးနီခွက်နဲ့ ရေသောက်ပေးမ ယ်ဆိုရင် thyroid hormone level ကိုညှိပေးတဲ့ အတွက် အကျိတ်သက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြေးနီမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေလိုပဲ antioxidant တွေပါရှိ ပါတယ်။ ဒီ antioxidant တွေကြောင့် အသားအရည်တွဲ ကျတာမျိုး၊အရေးအကြောင်း ဖြစ်တာတွေကို ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။
သူများတွေ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်နေချိန် သင့်မှာတော့ နုနယ်ပျိုမျစ်တဲ့အသားအရည်ကျန်ရှိနေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကမကျန်းမာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း မလန်းဆန်းတော့ပါဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ ကြေးနီကတော့ စိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတဲ့ 
အပြင်စဉ်းစား တွေးခေါ်မှု အားလည်းကောင်းစေ ပါတယ်တဲ့။ အလွယ်တကူ မေ့လျော့တာမျိုးလည်း မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကြေးနီခွက်လေးတွေထဲ ရေထည့် တစ်ညသိပ်ပြီး သောက်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေး လုပ်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။